16 Xidig Oo Caan Ah Kuwaaso Qaliin Wajiga Ah Mareen Dibna Oga Shalaayen Kangana Ayaa Kujirto (+Sawiro) – Filimside.net
16 Xidig Oo Caan Ah Kuwaaso Qaliin Wajiga Ah Mareen Dibna Oga Shalaayen Kangana Ayaa Kujirto (+Sawiro)
December 18, 2017 Ali Aadan
Taariikhda: December 18, 2017
Wajiga waa meesha qofka in badan ka fikiro waana xubinta ugu muhiimsan jirka xaga quruxda marka la joogo sidaa awged ayuuna qof marwalba muraayad u isticmaala uguna fikiraa inuu wajigiisa qurux badnaado.
Hadaba waxaa jiraa xidigo ayaga wajigooda qurux inee u helaan awged wajiga qaliin u mareen si uu u qurux badnaado balse markii dambe ka qoomameyeen.
Xidigahaas waxay isugu jiraan kuwa shirkado kala duwan ka kala shaqeyaan iyo kuwa Tvyada ka shaqeyaaanba.
Halkaan Hoose Kaga Bogo Xidigaha Caanka Ah Ee Wajigooda Qaliin Ku Sameyeen:
1. Kim Kardarshian:
Waa atirisho hadana Model ah waxay qaliin kusameysay wajigeeda balse markii dambe wey ka shalaaysay Before sawirka ah waa markii hore sidee ahed After sawirka ahna wa markee qaliinka isku sameysay maxay ka qoomameysay walee in badan ayee ka qoomameysay.
2. Courtney Cox:
Waa atirisho Hollywood ah sido kalena aflaamta maalgaliso Director na ah waxay caan ku tahay doorkeeda Monica balse xidigtaan qaliin dhanka wajiga ah ayee martay ilaa maantadana ma ilaawdo falkii ay sameysay iyo quruxdedii ay ku cayaartay.
Scott “Carrot Top” Thompson:
ninka madadaalada caanka ku ah ee lagu magacaabo Carrot Top waa nin caan ah oo dadka in badan ka qosliya balse hadeer waayihiisa lama jooga.
Xidigaan qaliin bishimaha ah (Lips) ayuu maray balse maanta waa mid uu ka shalaayo in badan.
Atirishada caanka ah ee Kangana Ranaut taaso ka xamaalata Bollywoodka ayaa kamid noqotay liiska xidigaha qaliinka mareen.
Balse xidigtaan waxay qaliin kusameysay bishimaheda ayadoo bishimo qurux badan kuwii hore ka soojiidasho wanaagsan sameystay maadama kuwii hore aad u waawenaayen.
Ranaut kama qoomameyn maadama bishimaheda qurux kusoo baxeen markee qaliinka kusameysay.
Atirishada hadana Modelka ah ee lagu magacaabo Gauhar Khan ayaa qaliin kusameysay bishimaheda si ay bisho qurux badan u hesho sida Kangana aan kor ugu soo aragnay ookale.
Balse xidigtaan wey ka qoomameysay falkii ay kusameysay bishimahedii oo awal qurux badnaa oo ay hada ku cayaartay.
Lasoco Qeybta Xigta Ee Maqaalkeena Xiisaha Leh:
Waxaa Aqrisay 3,795